Bolt B80၊ အပြင်ပိုင်း၊ နစ်မြုပ်ပြီးလှပသော SSD | Gadget သတင်း
Bolt B80၊ အပြင်ပိုင်း၊ နစ်မြုပ်ပြီးလှပသော SSD ဖြစ်သည်
ဟိုဆေး Alfocea | | ပစ္စည်းများ
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ကိုသင်ဖတ်သည့်အခါ၊ သင်ထင်မြင်ခဲ့သည့်ပထမဆုံးအချက်မှာစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည် - « A submersible ပြင်ပ hard drive ကို? ဘာအတွက်လဲ? ရေကန်ထဲရှိကွန်ပျူတာနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသလား။ ငါတို့လိုချင်တာတွေအကုန်ရပြီ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာဆီလီကွန်စွမ်းအား၏အဆိုပြုချက်ကို“ butter butter နှင့်” အသုံးပြုသူတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားကြလိမ့်မည်။
ဆီလီကွန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ပထမဆုံး portable SSD drive အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် disc ကိုပုံတူ disc ကိုတစ် ဦး ကမ်းလှမ်းသော redundancy တန်ဖိုးရှိ ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေခုခံ IP68 အသိအမှတ်ပြုခံရသည် လေ့လာနေစဉ်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းကော်ဖီ၊ အချိုရည်နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအရည်များကိုသောက်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Bolst B80, သတိပညာနှင့်ခံနိုင်ရည်ဆက်စပ်ပစ္စည်း
Bolt B80 ပြင်ပ SSD သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်သည် သုံးသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာ 120GB, 240GB နှင့် 480GB တို့ကိုအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လက်ဆောင်ပေးမယ် အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား, မြို့ပတ်ရထားနှင့်ပြားချပ်ချပ်မည်သည့်အိတ်ကပ်ထဲမဆိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။ ထို့အပြင် ၁၁.၉ မီလီမီတာအထူသာရှိပြီးအလေးချိန် ၅၃ ဂရမ်သာရှိသေးသည်။ Silicon Power က B11,9 ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည် စျေးကွက်ထဲတွင်အပါးလွှာဆုံးအိတ်ဆောင် SSD ကို, သောသံသယဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ် discs တွေကိုသာကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ယခင်က, HDD ကိုသို့မဟုတ်စက်မှု discs တွေကို, တားဆီး။
B80 သည် USB 3.1 connection တစ်ခုရှိပြီး၎င်းမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသည် USB Type C connector၎င်းကို USB 2.0 မှမည်သည့် connector နှင့်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန် USB-C သို့ USB-A သို့ဆက်သွယ်သည်။
ပြေးမြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, Bolt B80 ကမ်းလှမ်း အလယ်အလတ်ဖိုင်လွှဲပြောင်းနှုန်းသည် 450MB / s မှ 500MB / s သို့ရှိသည် ဖတ်ရန်နှင့်ရေးရန်အတွက်၎င်းသည် Samsung ၏သယ်ဆောင်နိုင်သော SSD ကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင်, စျေးနှုန်းကိုမသိရသေးပါ ဒီမှာဘာရှိမယ် ဆီလီကွန်စွမ်းအားဖြင့် Bolt B80, ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးချနိုင်ဖို့စောင့်နေရ ဦး မှာပါ၊ ဒါကငါတို့ရဲ့စားပွဲခုံမှာကောင်းကောင်းကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Bolt B80၊ အပြင်ပိုင်း၊ နစ်မြုပ်ပြီးလှပသော SSD ဖြစ်သည်
Sony Xperia Touch သည်စျေးကွက်အတွင်းသို့ကျဆင်းသွားသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်
Phillips နှင့် AOC တို့သည်မော်နီတာဈေးကွက်ကိုဆက်လက် ဦး ဆောင်ရန်မိမိတို့၏ကတိက ၀ တ်ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်